သငျသညျရှာဖွေနေကောင်းတဲ့အောင်စိတ်ဝင်စား Snowmen တန်ဆာခံစားခဲ့ရ ယခုရာသီများအတွက်, ထို့နောက်သင်သည်လက်ျာစာမျက်နှာ၌ရှိကြ၏.Snowmen တန်ဆာခံစားခဲ့ရ: ရိုးရှင်းသောပန်းတွင်းမှနှင့်ရောင်စုံဝမ်းနည်းနှင့်ထည်နှင့်အတူဘဝကိုဤချစ်စရာပန်းကပ်ပုံဖော်ခြင်း snowmen ယူခဲ့. သင်တစ်ဦးအဆင်တန်ဆာရွေးချယ်နိုင်ပါသည်, သကြားလုံးကြံ, မည်သည့်နှင်းဖုံး friend.Felt Snowmen တန်ဆာအဘို့လွမ်းသူ့ပန်းခွေသို့မဟုတ်အားလပ်ရက်ဆုလက်ဆောင်
Snowmen ပုံစံများ (သင်အွန်လိုင်းရှာဖွေပြီးဒေါင်းလုဒ်ဆွဲနိုင်ပါသည်)
02-01 မတ်လ / 2-မှောင်မိုက်မီးခိုးရောင်ဝမ်းနည်း၏လက်မရင်ပြင် (နောက်ခံပုံများ)
02-01 မတ်လ / 2-အသီးအသီးအရောင်ဝမ်းနည်း၏လက်မရင်ပြင် (စက္ကူ)
9×12-အဖြူဝမ်းနည်း၏လက်မအပိုင်းအစ (snowmen နှင့်သကြားလုံးကြံ)
အပ်ချုပ်ချည်: အဖြူ, စိမ်းလန်းသော, အနီရောငျ, အပြာနုရောင်, မှောင်မိုက်မီးခိုးရောင်
အပ်: အပ်ချုပ်, ပန်း
ပန်းထိုးချည်မျှင်: ညိုသော, အနက်ရောင်, အဖြူ, ရှေ, အနီရောငျ
3 သေးငယ်တဲ့အနီ Pom-poms
cut Shape (Snowmen တန်ဆာခံစားခဲ့ရ)
အဖြူရောင်စက္ကူဖြင့်ဝက်ဘ်ကနေအခမဲ့ပုံစံနှင့်ခြေရာတွေကို Download လုပ်ပါ; ဖြတ် 1/8 ထိုအမှတ်အသားလိုင်းများအပြင်ဘက်လက်မ. လက်ျာအရောင်ဝမ်းနည်းသို့မဟုတ်ထည်အတွက်မဆိုပုံသဏ္ဍာန်ခြေရာကောက်. tracing လိုင်းများပေါ်ပုံစံမျိုးစုံထွက် Cut.
ရာဌာန applications များ
သင့်ရဲ့ပုံစံပေါ်ဓာတ်ပုံနှင့်နေရာချထားပုံကိုရည်ညွှန်းပြီး, တိုင်းမှောင်မိုက်မီးခိုးရောင်ဝမ်းနည်းအပေါ်တစ်ဦး snowman ထား 2-1 / 2-လက်မစတုရန်း; တွယ်အပ်. snowmen ၏အနားလက်အောက်တွင် 1/8. တစ်ဦးဆေးထိုးအပ်နှင့်အဖြူချည်အသုံးပြုခြင်း, လက်နောက်ခံအတွင်း snowmen applique.
အသီးအသီး snowman ၏ခေါင်းပေါ်မှာဦးထုပ်ကိုတင်. အနားလက်အောက်တွင် 1/8 ဦးခေါင်းနှင့်နောက်ခံပန်းကပ်ပုံဖော်ခြင်းမှအဖြူစက်ချုပ်ချည်သီးအသီးထုပ်လက်မအသုံးပြု. တစ်ဦးနှာခေါင်းနှင့်တိုင်း snowman ပန်းကပ်ပုံဖော်ခြင်းများအတွက်ပဝါအဘို့အထပ်ခါတလဲလဲလုပ်ပါ.
Designs ချယ်လှယ်(Snowmen တန်ဆာခံစားခဲ့ရ)
ရေတွင်ပျော်ဝင်နေသောအမှတ်အသား၏အကူအညီနှင့်အတူနှင့်နေရာချထားကားချပ်ကိုရည်ညွှန်း, မျက်စိ, ပါးစပ်, လက်နက်, မည်သည့်အလှဆင်နှင့်လက်တို့ကိုချမှတ်ခြင်း. အနက်ရောင်ကြားရှင်းကြိုးနှစ်ယောက် strands အသုံးပြုခြင်း, မျက်လုံးတစ်ဖက်စီအတွက်တစ်ဦးပြင်သစ်ထုံးထား. အနက်ရောင်ကြားရှင်းကြိုးများနှင့်တိုင်းပါးစပ်လက်နက်ပတ်ပတ်လည်ပြေးအတိုတွင်းမှသုံးပါ. ချုပ်လက်နက်နှင့်လက်ကို back မှအညိုရောင်ကြားရှင်းကြိုးသုံး strands ကိုသုံးပါ.
တစ်ဦး snowman ထမြောက်စေတော်လက်အထက်ရာထူးသို့မဟုတ်သကြားလုံးကြံလွမ်းသူ့ပန်းခွေ, သို့မဟုတ်ကိုယ့်အောက်ကအဆင်တန်ဆာများ၏အနေအထားကိုလက်ထမွောကျ. ခံစားခဲ့ရအနားလက်အောက်တွင် 1/8 နောက်ခံမှကိုက်ညီတဲ့အပ်ချုပ်ချည်အနားကပ်ပန်းပုံဖော်ခြင်းလက်မအသုံးပြု.
သကြားလုံးကြံအပေါ်ခံရသောဒဏ်ချက်အားဖွဲ့စည်းရန်အနီရောင်ပိုးထည်နှင့်ဖြောင့်တွင်းမှခြောက် strands ကိုသုံးပါ.
အဆင်တန်ဆာအဘို့, အဆင်တန်ဆာ၏ထိပ်နဲ့အောက်ဆုံးအပေါ်တစ်ဦးကြားရှင်းကြိုးကိုရွှေအစင်း backstitch နှစ်ယောက် strands ၏အသုံးပြုမှုကိုလုပ်. အဆင်တန်ဆာ၏ဗဟိုကျော်လက်ဝါးကပ်တိုင် stabbing မှသုံးအနီကြားရှင်းကြိုးနှစ်ယောက် strands အသုံးချဖို့. တစ်ဦး snowman လက်ညှိုးကိုပတ်ပတ်လည်ကိုတက်ချုပ်အဆင်တန်ဆာနောက်ချိတ်အပေါ်အနက်ရောင်ကြားရှင်းကြိုးနှစ်ယောက် strands ကိုသုံးပါ.
ကော်လာပေါ်အစင်းတွေချုပ်ဖို့ကိုရွှေပိုးနှင့်ဖြောင့်တွင်းမှနှစ်ယောက် strands ကိုသုံးပါ. ရွှေကြားရှင်းကြိုး၏တိုတောင်းတဲ့မျှင်အသုံးပြုခြင်း, လွမ်းသူ့ပန်းခွေရဲ့ထိပ်မှာအနည်းငယ်ထိုးနှက်မှုတစ်ခုယူ, တင်းကျပ်အပေါ်အလယ်ဗဟိုချုပ်, နှင့်ဆေးထိုးအပ်ကိုဖယ်ရှား. သေးငယ်တဲ့သက်တံ့အတွက် Linker မျှင်; အလိုရှိသောအရှည်ပေါ်မှာချုံ့ခြင်းကြီးစွန်း. ဆန္ဒရှိပါက, သေးငယ်တဲ့မှိုချုပ်နှင့်အတူဗဟိုမျက်နှာကြက် secure.
အနီရောင်အစက်ချုပ်ချည်အသုံးပြုခြင်း, အသီးအသီးထုပ်၏ထိပ်ပေါ်မှာတစ် pompon ချုပ်. ပြင်သစ်မိုင်ကျပန်းတိုင်းနောက်ခံချုပ်အဖြူကြားရှင်းကြိုးခြောက် strands ကိုသုံးပါ, နောက်ခံ၏အပြင်ဘက်အစွန်ပတ်ပတ်လည် 1/8 လက်မအရွယ် unstitched နယ်စပ်ထွက်ခွာ.
တစ်ကျောခံစားခဲ့ရစတုရန်းတခုတခုအပေါ်မှာချယ်လှယ်သောစတုရန်း pin. pin ဖဲကြိုးအသီးအသီးအဆင်တန်ဆာ၏ထိပ်ပေါ်မှာအလွှာအကြားအဆုံးသတ်. အတူတူမှောင်မိုက်မီးခိုးရောင်ဝါယာကြိုးချုပ်အပိုငျးပိုငျးကိုသုံးပါ, ချုပ် 1/8 အသီးအသီးအစွန်းကနေလက်မ. ပိုပြီးစစ်ဆေးမှုများများအတွက် Checkout
ကြည်ညိုဘွယ်ကောင်းသော Snowmen တန်ဆာ
စက်ဆုပ်ရွံ့ရှာဘွယ်သော snowman Yard Decoration
Filed Under: ဘလော့ Tagged With: ခရစ်စမတ်ဝမ်းနည်း, ခရစ်စမတ်လက်မှုပညာခံစားခဲ့ရ, ခရစ်စမတ်အလှဆင်ခံစားခဲ့ရ, ခရစ်စမတ်အဆင်တန်ဆာခံစားခဲ့ရ, ခရစ်စမတ်အဆင်တန်ဆာလက်မှုပညာ, ခရစ်စမတ်အဆင်တန်ဆာစိတ်ကူးများ, diy အဆင်တန်ဆာ, ခရစ်စမတ်ခံစားခဲ့ရ, ခရစ်စမတ်လက်မှုပညာခံစားခဲ့ရ, ခရစ်စမတ်အလှဆင်ခံစားခဲ့ရ, ခရစ်စမတ်အလှဆင်ပုံစံများခံစားခဲ့ရ, ခရစ်စမတ်အလှဆင်အောင်ခံစားခဲ့ရ, ခရစ်စမတ်အဆင်တန်ဆာပုံစံများခံစားခဲ့ရ, ခရစ်စမတ်အဆင်တန်ဆာခံစားခဲ့ရ, ခရစ်စမတ်အဆင်တန်ဆာလုပ်ခံစားခဲ့ရ, ခရစ်စမတ် Stock ပစ္စည်းများခံစားခဲ့ရ, ခရစ်စမတ်သစ်ပင်ခံစားခဲ့ရ, ခရစ်စမတ်သစ်ပင်အလှဆင်ခံစားခဲ့ရ, ကလေးတွေအဘို့အခရစ်စမတ်သစ်ပင်ခံစားခဲ့ရ, ခရစ်စမတ်သစ်ပင်အဆင်တန်ဆာခံစားခဲ့ရ, အလှဆင်ခံစားခဲ့ရ, ခံစားခဲ့ရအဆင်တန်ဆာပုံစံများ, အဆင်တန်ဆာခံစားခဲ့ရ, snowman ခံစားခဲ့ရ, snowman ပုံစံခံစားခဲ့ရ, အခမဲ့ snowman ပုံစံများခံစားခဲ့ရ, စတော့ရှယ်ယာပစ္စည်းများခံစားခဲ့ရ, သစ်ပင်အလှဆင်ခံစားခဲ့ရ, xmas အလှဆင်ခံစားခဲ့ရ, လက်ဖြစ်ခရစ်စမတ်အလှဆင်, အိမ်လုပ်ခရစ်စမတ်အဆင်တန်ဆာ, ကလေးတွေအဘို့အိမ်လုပ်ခရစ်စမတ်အဆင်တန်ဆာ, တစ်ဦး snowman များအတွက်မုန္လာဥနီနှာခေါင်းအောင်ဘယ်လို, ဘယ်လောက်ဝမ်းနည်းထဲက snowman ဦးထုပ်လုပ်, ဝမ်းနည်းထဲက snowman အောင်ဘယ်လို, ခရစ်စမတ်အဆင်တန်ဆာဇီးကွက်, snowman ဦးထုပ်ပုံစံ print ထုတ်လို့ရတဲ့, snowman နှာခေါင်း template ကို